Vao tamin’ny 23 jolay lasa teo mantsy dia tovolahy kely roa avy nividy lasantsy no nanao hitsin-dalana nanapaka ny “piste” any an-toerana raha efa niomana ny hisidina ny fiaramanidina iray. Ilay zaza iray anefa mbola taraiky ka voatery nosamborina haingana nanavotana ny ainy. Voatery nohamafisina ny fanaraha-maso ireo olona manao hitsin-dalana amin’ny “piste” ao Sambava ho fiarovana ny ainy. Olona fito hatreto no efa tratra noho ny fahazaran-dratsy, raha ny loharanom-baovao azo. Ny dimy tamin’ireo no saron’ny zandary raha saron’ny polisy kosa ny roa ambiny. Na izany aza tsy noraisina ho sazy izany fa kosa natao hananarana azy ireo tsy hanao hitsin-dalana intsony. Mety hitarika amin’ny fanakatonana ny seranam-piaramanidina ny tsy fahafehezana ny fisorohana ny loza, izay mety avy amin’ny tsy fitandreman’ny sasany toy ny fihetsik’ireo mpanao hitsin-dalana efa nosamborina ireo.